Global Voices teny Malagasy » Koety : Ny fijalian’ireo vondrom-piarahamonin’ny tsy manana zom-pirenena any Koety, Ny fahanginana sy ny fanafoanana ny zo maha-olombelona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2019 11:54 GMT 1	 · Mpanoratra Gulf Center for Human Rights Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Koety, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Ireo Koetiana tsy manana zom-pirenena mitaky ny zony tamin'ny 30 martsa 2019. Sary nomen'ny mpisera Bidoon, avy tamin'ny Wikimedia [CC BY-SA 4.0 ]
Nosoratan'i Khalid Ibrahim , tale mpanatanteraka ao amin'ny Gulf Center for Human Rights,  fikambanana tsy miankina tsy mitady vola izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fiombonana ary ny fivoriana amim-pilaminana any amin'ny faritr'i Golfa sy ireo firenena manodidina azy, ity lahatsoratra ity.
Vinavinaina ho 120,000 eo ho eo ny isan'ireo olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina Bidoon  ao Koety, tsy manana taratasy ara-panjakana hahafantarana azy ry zareo. ‘Without’ ( tsy misy’) no azo andikàna ny teny Bidoon ho amin'ny teny anglisy ary voambolana ampiasaina mba hamaritana ireo vondrom-piarahamonina tsy manana zom-pirenena any amin'ny faritr'i Golfa.
Foanan'ny governemantan'i Koety ny zo fototr'izy ireo, indrindra fa ny maha-olom-pirenena, ny fanabeazana ary ny fikarakarana ny fahasalamana. Na efa hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany tamin'i Angletera tamin'ny 1961 aza no nipetrahan'ny Bidoon tany Koety, ary na niaro ny tanin-dry zareo nandritra ny fanafihan'i  Iràka an'i Koety tamin'ny 1990 aza ny sasany, dia mbola mitohy miaina tsy manana izay fitaovana ahazoany ny zony feno amin'ny maha-olom-pirenena sy ny zo fototra ry zareo.
Raha tokony ho olom-pirenena mahatoky no andraisan'ny governemanta any Koety azy ireo, dia naleony namorona sakana maro hanokana-monina azy ireo amin'ny fiarahamonina ary tsy nampiseho faniriana ny hanova izany fepetra izany izy. Raha nanolo-tena ho amin'ny asa am-pilaminana hiarovana ny zon'olombelona mba hitakiana ny zony ireo Koetiana sasany, ireo hafa kosa namoy fo ka namono tena, toa an'i Ayed Hamad Mudath,  lehilahy 20 taona, izay maty namono tena tamin'ny 7 jolay 2019 noho ny hasorenana amin'ny tsy fahampian'ny taratasy maripamantarana azy izay tokony ho nampiasainy tamin'ny fianarana, asa ary ahazoana ireo tolotra natao ho an'ny daholobe.
Tamin'ny 2010, najoron'ny governemanta any Koety tamin'ny alàlan'ny didim-panjakana laharana 467 ny Ivon-toerana mikarakara ny olan'ireo Mponina Tsy Ara-Dalàna izay heverina fa hiandraikitra amin'ny fomba ara-drariny sy haingana ny olana lavarenin'ny vondrom-piarahamonina Bidoon, nefa tsy vitan'ity vondrona napetraky ny governemanta ity ny namadika ny toe-draharaha  na ny niaro ireo zo fototra na ny zo maha-olona ny vahoaka Bidoon, taona vitsy taty aorinan'ny nisiany.
Nanomboka ny 11 jolay 2019  ny fisamborana ireo Bidoon mpikatroka mafana fo na dia tsy nisy didy ara-pitsarana navoakan'ny manampahefana mahefa aza. Lasibatr'ireo fisamborana ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpanao fihetsiketsehana izay nikarakara ireo hetsipanoherana  mitaky ny hankatoavana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ny tsy manana zom-pirenena taorian'ny famonoan-tenan'i Mudath.
Tamin'ny 2 Septambra, nampitsahatra ny fitokonany tsy mihinan-kanina ireo Bidoon mpikatroka voagadra . Sary avy amin'ny Visualizing Impact mampiseho ny fiantraika ara-fiziôlojian'ny fitokonana tsy mihinan-kanina [CC BY-NC-ND 4.0 ].
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/14/142976/
 Gulf Center for Human Rights,: http://www.gc4hr.org/
 Vinavinaina : http://www.kuwaithr.org/news/society-news/item/832-1414512.html
 Ayed Hamad Mudath,: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/kuwait-authorities-crackdown-on-protesters-demanding-citizenship-rights/
 11 jolay 2019: https://www.gc4hr.org/news/view/2168